Salotra Mavo : Somary niakatra kely ny herisetran’ny polisy tao Frantsa · Global Voices teny Malagasy
Manontany ny hamafin'ny herisetra famoretana
Voadika ny 14 Mey 2019 5:27 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, polski, русский, Shqip, Italiano, Français
Fihetsiketsehan'ireo Salotra Mavo, 16/03/2019 tao Parisy. (Photo M.A.)
Herisetran'ny polisy, misy foana saika isaky ny Sabotsy. Tsy ireo mpandrava sy mpanakorontana no maratra sy nitondra takaitra, fa ireo mpanao fihetsiketsehana.
Tezitra mafy i David Dufresne, mpanao gazety miasa tena. Hatramin'ny nanombohan'ny hetsik'ireo Salotra Mavo, nanisa ny fitambaran'ireo naratra sy nitondra takaitra vokatry ny herisetran'ny polisy izy. Ny Alatsinainy 18 Martsa, raha nivahiny tao amin'ny France Inter, nomeny tamin'ny antsipirihany ny dingana nizorany.
Nifantoka tamin'izy io aho hatramin'ny fiandohan'ny volana Desambra, rehefa nahita fa niely be tety anaty tambajotra sosialy ireo sary mahatohina nahitàna an'ireo nitondra takaitra. Satria dia rotika tokoa no resaka eto, olona 23 no voaisako vaky maso, dimy no bory tànana.
Mba hiampangana ireo herisetra, namorona tranonkala iray ety anaty tambajotra i David Dufresne, iarahany miasa amin'ny gazety tsy miankina Mediapart,.Nomena anara-maneso hoe « Allo Place Beauvau » mba hanondroana fomba filaza iray tao amin'ny Twitter natao hitorohana any amin'ny polisy ny votoaty iray tsy ara-dalàna na manafintohina, angonin'ilay tranonkalany ny ankamaroan'ireo naratra hatramin'ny niantombohan'ilay hetsika. Omeny amin'ny antsipirihany ny endrikendriky ny ratra anton'ilay fitorohana, izany hoe, ireo mety ho vokatry ny tsy fisiana na tsy fahafehezana ny fitsipi-pitondrantena teo amin'ny polisy.
Amin'ireo fitorohana 550 voaangona, maherin'ny 222 no miresaka ratra eny amin'ny loha, izay eo amin'ny roapolo eo no tsy afaka intsony hampiasa ny masony, ary dimy no bory tànana an'ila. Tamin'ireo niharam-boina, 419 mpanao fihetsiketsehana, 57 mpanao gazety, 37 tsy ampy taona, 19 mpandalo ary 18 mpisehatra amin'ny fitsaboana.
Ratra nandritra ny fihetsiketsehana. Sary Twitter @Alloplacebeauveau.
Ao amin'ny Twitter, zarainy ny sarin'ireo ratra nalefan'izay niharam-boina. Indraindray tena mandòna, mampiseho ratra mafy nataon'ireo mpitandro filaminana nandritra ny fihetsiketsehana.
Herisetran'ny polisy : efa 260 raha kely indrindra ny fitorohana ao amin'i @davduf. Maha-isa maratra mafy 93 ka 13 amin'ireo paoka maso an'ila i @CheckNewsfr. Salotra mavo iray no voalaza fa ambavahaonan'ny fahafatesana. Maro ihany koa ireo mpanao gazety naratra. Tsy miova : ny fahanginan'ny governemanta pic.twitter.com/D7ZNHoAURZ
— David Perrotin (@davidperrotin) 14 Janoary 2019
Manontany ny hamafin'ny herisetra famoretana. Ahoana no hampisy ny hoe poaka maso an'ila na bory tànana an'ila noho ny fandehanana manao fihetsiketsehana ?
Fitaovampiadiana iray miteraka resabe
Fanazavana iray no mitoetra, dia ny fampiasàna betsaka ataon'ny mpitandro filaminana an'ilay fitaovampiadiana iray miteraka resabe: ny fandefasana bala fiarovantena (LBD). Vita avy any Soisa, ary noforonina tany am-boalohany tsy ho entina mamono na handratràna mafy izay kendrena izy io, io famdefasana bala io no tsy mitsahatra mandrehitra ny adihevitra. Ampangain'ireo tsy mankasitraka azy io ny maha-mampididoza azy. Teo anelanelan'ny 2004 sy 2013, efa nisy telopolo teo ho eo ireo naratra mafy noho ny nampiasàna LBD. Betsaka toy ny hatramin'ny niantombohan'ny hetsika Salotra Mavo, tamin'ny Novambra 2018.
Tamin'ny Janoary, nisy ireo mpitsabo nandefa fanangonantsonia ho fampitsaharana ny fampiasàna LBD. Araka ny lazain'i Laurent Thines, “neurochirurgien” sady lehibenà sampandaharaha ao amin'ny CHRU ao Besançon :
Piti-bala karazany amin'ny LBD4O, ohatra, atifitra aminà hafainganana 90m/sec (324 km/h) dia manana hery fiantraika 200 joules: toy ny hoe, avy aminà haavo 1m no anjeràna parpaing 20kg eo amin'ny tava na ny lohanao !
Ara-potokevitra, ny fampiasàna LBD dia tsy tokony hatao afa-tsy «amin'ny faritry ny vatana sy ny rantsam-batana ambony na ambany », araka ny teny miampita avy amin'ny tale jeneralin'ny polisy, Eric Morvan. Indrisy anefa, manafosafo ihany ny fanamarihana nentiny, ary marobe ireo ratra naterak'izany. « Fanapahana rantsam-batana, faharavan'ny endrika ka zary takaitra entina mandramaty, fahapotehan'ny taolan-tava na ny ativava, faharovitana na fanesorana ny voamaso, fitriaran'ny karandoha, fahavakisan'ny lalandrà any anaty ka mety hitondra ho amin'ny fahafatesana ary mitarika takaitra any amin'ny atidoha, takaitra marobe niteraka fitandrozorana lavabe an'ireo « Vaky Vava »…Aina maro araka izany no natao sorona… » hoy ny alahelon'i Laurent Thines.
Anisan'ireo fitaovampiadiana famoretan'ireo mpitandro filaminana ihany koa ny grenady fandravana olona mihodidina. Misy TNT izy ireny, ary ny fipoahany dia mety hanipy poti-by miaraka aminà tsoka mankarenina sy mandratra.
Frantsa no iray amin'ireo firenena hany sisa mampiasa ny LBD any Eoropa, arahan'i Plonina, Hongria, Tiorkia ary Gresy.
Sary nopihana tamin'ny 18 Martsa 2019 tao Parisy, niharanà toraka maro ireo mpitandro filaminana (Sary M.A.)
Hetsika fanoherana tsy manam-pahataperana
Tany ampiandohana , nipoitra tao Frantsa ho fanoherana ny fiakaran'ny hetra alaina amin'ny vidin'ny solika, vetivety ny hetsik'ireo Salotra Mavo dia nivadika ho andro iray fanoherana isankerinandro. Isaky ny Sabotsy, midina an-dalambe ireo mpomba azy mba hitaky fanovàna. Isan'ireo fitakiana, ny hisian'ny politika vaovao momba ny hetra, ny fanatsaràna ny fahafaha-mividy, ny fametrahana fitsapankevitra avy amin'ny hetsiky ny olompirenena na ihany koa ny hametrahan'i Emmanuel Macron fialàna.
Hatramin'ny volana Novambra, niteraka fahasimban-javatra betsaka tany amin'ny tanàna maro tao Frantsa ny hetsik'reo Salotra Mavo. Olona folo no maty « tsy nivantana » vokatry ny lozam-pifamoivoizana nisy nifandrfaisany tamin'ireo fihetsiketsehana. Tao Marseille, olona iray no maty rehefa tratry ny pitika grenady.
Raha maratra 2200 no tarehimarika neken'ny Ministeran'ny Atitany, ka folo amin'ireo « takaitra tsy afaka tsaboina intsony eny amin'ny maso », ekena sy iantsorohan'ny governemanta ny tetikadiny amin'ny fiahiana ny filaminana. Raha nanontanian'ireo mpanao gazety momba ireo herisetran'ny polisy tamin'ny Janoary 2019, nandritra ny fitsidihany tany Aude, dia nilaza ny minisitry ny atitany, Christophe Castaner, fa tsy nisy « namely salotra mavo » « na iray aza ny polisy sy zandary » .
Ny herisetra, hatrany
Tsy azo leferina… ireo fanararaotam-pahefana atao ivelan'ireo famoriambahoaka any Clermont-Ferrand, Rouen, Montpellier.
Deraiko ny hetsika ataon'ny mpitandro filaminana, mirotsaka an-tsehatra amin'ny saina tony sy fahavononana, na dia latsaka an'elanelany aza ry zareo.
— Christophe Castaner (@CCastaner) 23 Febroary 2019
Tamin'ny Febroary, nanetsika indray ny adihevitra ny minisitry ny atitany, tamin'ny fanamarinana ny fampiasana herisetra. Hatramin'ny niantombohan'ny fihetsiketsehana, tsy tapaka tafiditr'ireo mpandroba ny laharan'ireo mpanao fihetsiketsehana. Teraka ho valinkafatra amin'io herisetra io ny hetsika nataon'ireo mpitandro filaminana, hoy ilay minisitra.
Raha tsy nisy toerampivarotana voaroba, sakana najoro.
Raha tsy nisy fandoroana fiara, tranom-panjakana nobakoavina.
Raha tsy nisy fidarohana mpitandro filaminana.
Raha fintinina, raha nohajaina ny lalàna, tsy ho nisy ny naratra. pic.twitter.com/C3wQQq2fVv
— Christophe Castaner (@CCastaner) 1 Febroary 2019
Valinteny avy hatrany tao amn'ny Twitter an'i Alexis Kraland, mpanao gazety miasa tena, izay mitanisa olona naratra tsy nisy nifandraisany mivantana tamin'ireo fihetsiketsehana.
Fampielezankevitra feno fitaka ataon'ny fanjakana satria marobe tamin'ireo naratra no lavitra an'ireo sakana na fiara nirehitra, na tranom-panjakana norobaina sy masoivohonà banky na sampana mpikarakara trano fonenana, na toerampivarotana voaroba, na nifanatrika tamin'ireo mpitandro filaminana.
— Alexis Kraland (@akraland) 2 Febroary 2019
Angatahan'ny Firenena Mikambana ny hanaovana fanadihadiana
Hatramin'ny niandohan'ilay hetsika, 243 ireo fitorohana voapetraka any amin'ny l'IGPN (Inspection Générale de la Police Nationale), sampandraharaha iray natokana ho amin'ny fampiharan'ireo olon'ny fitandroana filaminana an-tsakany sy an-davany ny lalàna sy fepetra. 174 izao no fanadihadiana efa an-dàlana, hoy i Christophe Castaner, minisitry ny atitany. Kendren'ireny fanadihadiana ireny ny hanaporofoana raha toa ireo polisy ka tena nampiasa herisetra « tafahoatra». «Hosaziana ireo mpitandro filaminana » hoy ny fanambaràn'ny minisitra.
Mahatsiaro ho tohina amin'ny herisetra, velona ahiahy ilay Mpiaro Zo, Jacques Toubon, tao anatin'ny tatitra isantaona fanaony momba ny « fampiasàna betsaka ny LBD » izay efa nolazainy tany aloha ny tokony handraràna azy io. Efa nanaovany sosokevitra ihany koa ny tokony handraràna ny grenady mipoaka.
Ny Firenena Mikambana, tamin'ny alàlan'i Michèle Bachelet, kaomisera ambony momba ny zon'olombelona, dia nitaky ihany koa « ny hanaovana fanadihadiana lalina » momba ireo herisetran'ny polisy tao Frantsa hatramin'ny niantombohan'ilay hetsika.
Nandritra ny tafa iray nokarakaraina tamin'ny 7 Martsa, nolavin'i Emmanuel Macron ny fomba filaza hoe « herisetran'ny polisy ». « Aoka tsy hotenenina ny hoe “famoretana” na ny hoe “herisetran'ny polisy”, tsy azo ekena ireo teny ireo ao anatin'ny firenena iray tàn-dalàna » hoy ny filoha frantsay.
Tao Nice, nandritra ny seho an-tsehatra faha-19 nataon'ny Salotra Mavo, ramatoabe iray, 73 taona, mpanao fihetsiketsehana no naratra teo amin'ny lohany noho ny fianjerany. Mbola tsy nifarana akory aza ny fanadihadiana, dia efa nanamafy tao amin'ny vaovaon'ny Nice-Matin i Emmanuel Macron fa tsy “nifanehatra tamin'ireo mpitandro filaminana” ilay ramatoa be mpanao fihetsiketsehana.
Andro folo taty aoriana, nodisoin'ny mpampanoa lalànan'ny Repoblika ao Nice io fanambaràny io, izay nanazava fa loharano niteraka ilay fianjeran'io ramatoa telo amby fitopolo taona io ny polisy iray nihataka amin'ny maro.